ကေမန်ကျွန်းများအသားအရောင်ခွဲခြား Portfolio ကုမ္ပဏီ (SPC) ဖွဲ့စည်းခြင်း
ကေမန်ကျွန်းများအသားအရောင်ခွဲခြား Portfolio ကုမ္ပဏီ (SPC)
တစ်ဦးကကေမန်ကျွန်းများအသားအရောင်ခွဲခြား Portfolio ကုမ္ပဏီ (SPC) ကာကွယ်ထားတွင်လည်းသို့မဟုတ်ဆဲလ်တွေနဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 1998 ၏ကေမန်ကျွန်းစု၏ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာဥပဒေ (အပိုင်း XIV) မူလကတစ်ဦးချင်းအကောင့်သို့သူတို့ကိုငါခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်အာမခံထုတ်ကုန်များနှင့် policyholders ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့အာမခံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကာကွယ်ဆဲလ်ကုမ္ပဏီများ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ထူထောင်ထားတဲ့အခြားနိုင်ငံများနှင့်အခွန်ဟေဗန်ကိုလိုကျနာဖို့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည် (ဆဲလ် ) ။ တဦးတည်းကလာပ်စည်း၏အန္တရာယ်များနှင့် liabilities အခြားဆဲလ်များနှင့်အဓိကကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေခွဲထုတ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းစုနဲ့အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများသို့မယ့်အာမခံကုမ္ပဏီများအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမှချဲ့ထွင်ရန် 2002 ၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီများဥပဒေပြင်ဆင်။ မျိုးစုံကြွေးမြီအဆောက်အဦများ အသုံးပြု. နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ, အာမခံ, လေယာဉ်, သင်္ဘောများနှင့်ကော်ပိုရိတ်ပလက်ဖောင်းအပေါငျးတို့သ SPC ပညတ်တရား၏အကြိုးကြေးဇူးမြားကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများဂျမေကာနဲ့ကျူးဘားအနီးတွင်တည်ရှိသောကာရစ်ဘီယံတွင်တည်ရှိသည်ဗြိတိသျှပြည်ပနယ်မြေတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကယင်း၏ဧကရာဇ်အဖြစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်နှင့်အတူဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်အောက်မှာနေတဲ့ပါလီမန်မှီခိုသည်။ ဒါဟာဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ဥပဒေပြုစည်းဝေးပွဲကိုပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကကေမန်ကျွန်းများအသားအရောင်ခွဲခြား Portfolio ကုမ္ပဏီ (SPC) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်:
• နိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့် 100% ပိုင်ဆိုင်မှု: တစ်ဦးက SPC လုံးဝနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: နိုင်ငံခြားရေးပုကေမန်ကျွန်းစုမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမအခွန်အခများပေးဆောင်ပြင်ပ SPC ရဲ့အပြုအမူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်သည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: ပိုင်ရှင်များ (ရှယ်ယာရှင်များနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ) အမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။ အစိုးရ၏မှတ်တမ်းများအများပြည်သူကိုမရရှိနိုင်ကြသည်။
• ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: SPC ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ပေးသောသီးခြားတွင်လည်းသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်, ပိုင်ဆိုင်မှု, client များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတစ်အမျိုးမျိုးဆဲလ်သို့ကွဲကွာနိုင်ပါတယ်။
• တဦးတည်းပိုင်ရှင်: တဦးတည်းပိုင်ရှင်အဖွဲ့ဝင်, ဒါမှမဟုတ်ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးအနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။
• တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာညွှန်ကြားရေးမှူးအဓိကကော်ပိုရိတ်ကိုယျခန်ဓာအဘို့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းအဘို့လိုအပ်ပါသည်။
• အောက်ပိုင်းအန္တရာယ်များ: တဦးတည်းဆဲလ်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောဖြစ်လာသို့မဟုတ်ဥပဒေအရတစ်ဦးတရားရုံးတွင်တရားစွဲလျှင်သီးခြားဆဲလ်သို့ပိုင်ဆိုင်မှု, ပိုင်ဆိုင်မှု, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ထုတ်ကုန်ခွဲဝေတာဝန်ယူမှု၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ။
• အင်္ဂလိပ်: ဗြိတိသျှပြည်ပနယ်မြေတွေကိုအဖြစ်, အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အသားအရောင်ခွဲခြား Portfolio ကုမ္ပဏီ (SPC) အမည်
တိုင်း SPC ၎င်း၏အမည်ကို၏အဆုံးမှာစကားများ "အသားအရောင်ခွဲခြား Portfolio ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "SPC" တို့ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦး SPC အသားအရောင်ခွဲခြားတွင်လည်းဖန်တီးတဲ့အခါမှာတစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းတစ်မူထူးခြားသောနာမကိုအမှီရှိသည်နှင့်စကားတို့ကို "အသားအရောင်ခွဲခြား Portfolio" သို့မဟုတ်အတိုကောက်၎င်း၏အမည်ကိုအဆုံးတွင် "SP" သို့မဟုတ် "SP" တို့ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးက SPC လျှောက်လွှာကြေးနှင့်အတူတစ်လျှောက်စာချွန်လွှာနှင့်ကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူအသင်းက၎င်း၏ဆောင်းပါးများဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ SPC ၏ပထမဆုံးကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့်ကုမ္ပဏီများအဖြစ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
တစ်ဦးက SPC ကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူလျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သောအခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရေးသားထားသောအသိပေးစာတိုင်းအသားအရောင်ခွဲခြားအစုစုများ၏အမည်များအလှဆင်တင်သွင်းသည်။
တည်ဆဲကုမ္ပဏီများသည်အောက်ပါကြေငြာနှစ်ခုကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတစ်ဦးနိမ့်ဆုံးအားဖြင့်ကွပ်မျက်ခံရတဲ့ကြေငြာဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦး SPC သို့ပြောင်းနိုင်သည်
1 ။ အဆိုပါကြေငြာ၏3လအတွင်းကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် liabilities စာရင်း;
2 ။ မှတ်ပုံတင်ပြီးစီးမီဆိုဆိုင်းငံ့အရောင်းအပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ် liabilities ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါသော်၎င်း,
3 ။ ဘယ်လိုကုမ္ပဏီလုပ်ကိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထား;
4 ။ တစ်ဦး SPC အဖြစ်အတည်ပြုချက်အပျေါမှာ, တစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားဆက်ဆံအစုစုနှင့်ကုမ္ပဏီအရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်တော်မူမည်
5 ။ အသားအရောင်ခွဲခြားတွင်လည်း၏ဖန်တီးမှုအနည်းဆုံး $ 95 အမေရိကန်ဒေါ်လာသဘောတူညီချက်များ၏တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူအကြွေး၏အနည်းဆုံး 1,220% ။
6 ။ အသီးအသီး lists အရာအသားအရောင်ခွဲခြားတွင်လည်းထဲသို့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် liabilities လွှဲပြောင်းကို authorize အထူး resolution ကို။
သက်ဆိုင်လျှင်, CIMA အားဖြင့်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများ CIMA ကနေစာရေးသားခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်နှင့်ကြေငြာဖို့ကပူးတွဲရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ SPC ရဲ့ဒါရိုက်တာဖို့လုပျထုံးလုပျနညျးဖန်တီးပြီးထိန်းသိမ်းနည်းရမယ်:
1 ။ ခွဲခြားနှင့် SPC ရဲ့ယေဘုယျပိုင်ဆိုင်မှုကနေသက်သေပြအစုစုကိုပိုင်ဆိုင်မှုအသားအရောင်ခွဲခြားထိန်းသိမ်းရန်;
2 ။ ခွဲခြားနှင့် SPC ၏အခွားအသားအရောင်ခွဲခြားတွင်လည်းထံမှသက်သေပြအစုစုကိုပိုင်ဆိုင်မှုအသားအရောင်ခွဲခြားထိန်းသိမ်းရန်;
3 ။ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် liabilities အသားအရောင်ခွဲခြားတွင်လည်းအကြား comingled ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်; သို့မဟုတ်လျှင်အသားအရောင်ခွဲခြားတွင်လည်းအကြားလွှဲပြောင်းအပြည့်အဝတန်ဖိုးကိုမှာပြုနေကြသည်။
တစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားဆက်ဆံအစုစုတို့အတွက်သီးခြားအကောင့်ကိုအမြဲ comingled ပိုင်ဆိုင်မှု့ရိုးရှင်းတဲ့စာရင်းကိုင်အလေ့အထများထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်မခံကြရပေမည်။
တိုင်းအသားအရောင်ခွဲခြားအစုစုကိုရန်ပုံငွေနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသာတိုက်ရိုက်အစုစုနှင့်ဆက်စပ် liabilities နှင့်အကြွေးကျေနပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသားအရောင်ခွဲခြားအစုစုကိုပိုင်ဆိုင်မှုအကြွေးတွေနှင့် SPC ၏ဒါမှမဟုတ်တခြားအသားအရောင်ခွဲခြားတွင်လည်းအခြား liabilities ကျေနပ်ဖို့အသုံးပြုရမည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ အသားအရောင်ခွဲခြားတွင်လည်းနှင့် / သို့မဟုတ် SPC ရဲ့ယေဘုယျရန်ပုံငွေအကြားမည်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်လွှဲပြောင်းအမြဲအပြည့်အဝတန်ဖိုးကိုမှာဖြစ်ရပါမည်။
အကြွေးတွေနဲ့တိကျတဲ့အသားအရောင်ခွဲခြားအစုစု၏အခြား liabilities သာအစုစုကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ မလုံလောက်သောပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ရန်ပုံငွေများကိုအပြည့်အဝ liabilities ကျေနပ်အောင်တို့အားဤသို့သောအစုစုအတွက်တည်ရှိလျက်, SPC များအတွက်အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများခွင့်ပြုမှသာလျှင်လျှင်, liabilities အဆိုပါ SPC ရဲ့ယေဘုယျရန်ပုံငွေထဲကနေစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်တဦးတည်းအသားအရောင်ခွဲခြားအစုစု၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသည်အခြားအသားအရောင်ခွဲခြားအစုစုမှသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ရန်ပုံငွေအနေဖြင့်ကျေနပ်မှုဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။
အဆိုပါ SPC တစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားဆက်ဆံအစုစုတို့အတွက်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုစီးရီးသို့မဟုတ်အတန်းထဲတွင်ရှယ်ယာထုတ်ပေးရန် option ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် SPC သာ SPC ရဲ့ယေဘုယျပိုင်ဆိုင်မှုတွင်ထည့်သွင်းထားကြောင်းရရှိသောနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာများထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
တစ်ဦးအသားအရောင်ခွဲခြားအစုစုပါဝင်သောတိုင်းစာချုပ်စာချုပ်ရန်ပါတီအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အစုစုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရှင်းလင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အထူး SPC နှငျ့ပတျသကျသောစာချုပ်များရှင်းလင်းစွာတစ်ပါတီအဖြစ် SPC ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အသားအရောင်ခွဲခြားတွင်လည်းမဆိုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုဘယ်တော့မှရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်း၏ဒါရိုက်တာများအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိပေါ်မှာ SPC ဖွငျ့ဤတာဝန်တစ်ခုဖောက်ဖျက်ကုစားရမည်ဖြစ်သည်နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးပါတီပြိုပျက်ရာ၏အကြောင်းကြား။
အဆိုပါ SPC ဖျက်သိမ်းရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်၌တည်ရှိ၏လျှင်, အရည်သူတို့ရဲ့ဒါရိုက်တာများအားဖြင့်သာတည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများမှညီအတွက်အသားအရောင်ခွဲခြားတွင်လည်း '' ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းစုတရားရုံးမဆိုအသားအရောင်ခွဲခြားအစုစုကိုရိုသေလေးစားမှုအတွက်လက်ခံခန့်ထားမည်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောနှင့်၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် / သို့မဟုတ် liabilities ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းယူဆ။ အဆိုပါ SPC ၎င်း၏ဒါရိုက်တာများ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကြွေးရှင် receivership တစ်ဦးကိုတရားရုံးအမိန့်အဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အခြားနိုင်ငံများတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်စာချုပ်များသို့မဟုတ် liabilities မှပါတီများ၏အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသောတရားစီရင်မှုနှင့်အတူစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကအားလုံးကိုကန်ထရိုက်ပုကေမန်ကျွန်းစု၏ပြင်ပတွင်ကျင်းပတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစပ်ဆိုင်သောအကြောင်းအကြံပြုသည်ကေမန်ကျွန်းများ၌တည်လိမ့်မှတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုသတ်မှတ်။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများဝင်ငွေအခွန်, ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်, ဆုကြေးဇူးကိုအခှနျ, အမွေဥစ္စာကိုအခှနျ, ဥစ္စာဓနအခွန်အခများ, ဒါမှမဟုတ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချကုမ္ပဏီများအားအခြားမည်သည့်အခွန်စည်းကြပ်ပါဘူး။ Dividends အခွန်ကောက်ခြင်းနှင့်မဆိုကြင်နာမရှိအခွန်ရှောင်အခွန်ရှိပါတယ်ကြသည်မဟုတ်။
ရှယ်ယာရှင်များအနေနဲ့နှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေး (ရှိပါက) လိုအပ်သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးများကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုကျင်းပနိုင်ပါသည်။
အစိုးရ၏မှတ်တမ်းများမှအများပြည်သူလက်လှမ်းမရှိပါ။ ရှယ်ယာရှင်များ '(နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ) အမည်များကိုအစိုးရကမှတ်တမ်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။
တစ်ခုကကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီကိုတစ်ဦး SPC အဖြစ်မှတ်ပုံတင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကြောင့်ခွင့်ပြုချက်5စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက် 10 အကြားကြာနိုင်မြျှောလငျ့နိုငျသို့ကူးပြောင်းခံရဖို့။
တစ်ဦးကေမန်ကျွန်းများအသားအရောင်ခွဲခြား Portfolio ကုမ္ပဏီ (SPC) နိဂုံးဖွဲ့စည်း
တစ်ဦးကကေမန်ကျွန်းများအသားအရောင်ခွဲခြား Portfolio ကုမ္ပဏီ (SPC) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်: 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ရှင်တွေ, privacy ကိုမျှအခွန်, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင် / အဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းဒါရိုက်တာ liabilities ၏အောက်ပိုင်းအန္တရာယ်များ, စီးပွားရေးပို့ချအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, နှင့်အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။